स्वस्तानी माताले हामी सबैको रक्षा गरुन् ! स्वस्थानी ब्रत कथा भाग – १५ सुन्नुहोस् ….( भिडियो सहित) «
Published : 24 January, 2020 8:38 am
आफ्नो मनोकांक्षा पूरा हुने धार्मिक विश्वासका साथ नेपाली हिन्दू महिला दिदीबहिनीले एक महिनासम्म श्रीस्वस्थानीको ब्रत बस्ने गर्नुहुन्छ । यो व्रत पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म एक महिना चल्दछ ।
एक महिना सम्म व्रत वस्ने विधि – श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत बस्ने व्यक्तिले पौष शुक्ल पूर्णीमा देखि आरम्भ गर्नु पर्दछ। आघिल्लो दिन हात गोडाका नङ काटी पवित्र भएर एक छाक मात्र खाएर बस्नु योग्य हुन्छ । पूर्णीमाका दिन म आज देखि म श्रीस्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्दछु भन्ने प्रतिज्ञा मनले गर्नु शुभ हुन्छ। त्यस दिन देखि एक महिना सम्म सात्विक भोजन गरि, कसैसँग दुर्वाच्य नबोली, निष्कपट भाव लिई व्रत आरम्भ गर्नु पर्दछ ।
नित्य प्रातः कालमा उठेर स्नान – सन्ध्या, नित्य–क्रिया सकेर जो भएको पत्र, पुष्प, फल, जलले स्वस्थानी परमेश्वरीको पुजन गर्नु पर्दछ। मध्यान्ह भएपछि जगदिश्वर श्रीमहाँदेवको शक्ति अनुसार सबै सामग्री तयार पारेर पुजन गर्नु पर्दछ ।
यस अवधिमा स्कन्द पुराणको केदार खण्ड अन्तर्गत माघ माहात्म्यको कुमार अगस्त्यबीच संवाद भएको स्वस्थानी व्रत कथा सुन्ने र सुनाउने परम्परा छ ।श्रीस्वस्थानीको व्रतकालमा काठमाडौंको साँखुस्थित शाली नदी, पशुपति, गौरीघाट, गुहेश्वरी तथा सतिदेवीका अङ्ग पतन भएका शक्तिपिठहरुमा घुइँचो लाग्ने गर्दछ ।श्रीस्वस्थानीको व्रतमा नेपाली भूमिको वर्णन गरीएको छ । श्रीस्वस्थानीमा चर्चा गरिएको शाली नदी र श्लेशमान्तक वन नेपालमा छ । कथामा उल्लेखित हुने विषय र घटना नेपाल कै सेरोफेरोमा भएको स्कन्द पुराणमा उल्लेख छ । साथै पावर्तीको पिता हिमालय पनि नेपाली हिमक्षेत्रमा रहेको छ । भिडियो सहित :